Sarin’ireo Mpisera Instagram Mampiseho Ny Zavon-tsetroka Mandrakotra an’i Khabarovsk · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Oktobra 2016 5:33 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, عربي, Ελληνικά, Español, English
Nihidy tao an-trano na nanao saron-tava ny mponin'i Khabarovsk ao amin'ny Farany Atsinanana ao Rosia rehefa mivoaka ny trano satria nandrakotra ny tanàna ny zavon-tsetroka tamin'ny Talata. Araka ny vaovao notaterin'ny tranonkala 2×2.su (eny, .su no sehatra lehibe indrindra ao amin'ny Firaisana Sovietika), nilaza ny mponina fa miaraka amin'ny fofona may ny zavon-tsetroka ary nihamafy nandritra ny roa andro lasa satria namely mafy tao Khabarovsk sy ny faritra manodidina ny afo. Manaramaso ny haavon'ny mônôksidan'ny karbôna ny manampahefana Rosiana, izay efa nitombo in-1,5 hatramin'ny nivezivezen'ny zavon-tsetroka.
Nanomboka nidina tao Khabarovsk ny setroka, tapa-bolana lasa izay, ary toa avy ao amin'ny sisin-tanin'i Shina, faritanin'i Heilongjiang sy ny Repoblika Jiosy Mizakatena, faritra Rosiana akaikin'i Khabarovsk no niavian'izany. Nilaza ireo manampahefana ao Khabarovsk fa ny lelafo tao Heilongjiang no niavian'ny setroka, ary nandefa taratasy tany amin'ny Departemantan'ny Fiarovana ny Tontolo Iainana Heilongjiang izy ireo, manangataka amin'ny manampahefan'ny faritany mba hanara-maso ny toe-javatra ary handray fepetra vaovao hisorohana ny afo amin'ny ho avy. Nandà ny filazan'ny manampahefana Rosiana ny manampahefana ao Heilongjiang, nilaza tamin'ny Global Times androany fa mbola tsy nanomboka nioty vokatra na nandoro mololo ny tantsaha ao amin'ny faritany- ary tsy hanomboka hanao izany mandra-pahatongan'ny volana Novambra noho ny orambe vao haingana.
Araka ny asehon'ny sary zanabolana avy amin'ny “Fire Map,” (tranonkala Rosiana mampiseho ny toerana misy doro ala manerantany amin'izao fotoana izao), rehefa nanomboka nandrakotra an'i Khabarovsk ny setroka roa herinandro lasa izay, tao Heilongjiang sy ny Repoblika Jiosy Mizakatena no tena nisy ny afo :
Nandritra ny roa herinandro farany, nitantara momba an'i Khabarovsk ireo mpisera Instagram satria misy lasa dia m isy tonga ny setroka; noraisina tamin'ny ankapobeny, ahitana karazana tati-baovao Instagram momba ny toe-javatra ny sary navoakan'izy ireo.
Sary nalefan'i Aleksеi Belyaevskii (@aleksei_80) 25 Okt 2016 tamin'ny 6:05 maraina PDT
Sary nalefan'i Таня Никифорова (@belayanik) tamin'ny 24 Okt 2016 tamin'ny 3:26 hariva PDT
Sary nalefan'i Халикова Юля (@yulia_khalikova_a) tamin'ny 14 Okt 2016 tamin'ny 10:00hariva PDT
Sary nalefan'i Catherine Afanasyeva (@kazhetsyatak) tamin'ny 14 Okt 2016 tamin'ny 4:06 maraina PDT
Sary nalefan'i Juliya Samokhvalova (@ptiz_siniz) tamin'ny 15 Okt 2016 tamin'ny 12:32 maraina PDT
Media sy Fanoratan-gazety 4 andro izay
Ady & Fifandirana 5 andro izay